သူမအ၀တ်အစားလေးတွေကို ရောင်းချပြီးရတဲ့ငွေနဲ့ လှူဖို့လုပ်နေပေမယ့် ဝေဖန်သူတစ်ချို့ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ မေ – Shwewiki.com
July 20, 2021 By t hs Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အဆိုတော်မေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း တော်လှန်ရေးအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေကတော့ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ဒီကာလမှာ တကယ်ကို စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသူတွေကို ကူညီဖို့အတွက် ပွဲတက်တစ်ချို့နဲ့ ရှုတင်များတွင် တစ်ခါပဲ ဝတ်ရသေးတဲ့ ဒီဇိုင်နာချုပ်အင်္ကျီများကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် ပို့စ်တင်ပြီးလျော့ေ ဈးဖြင့် ရောင်းချပေးနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
မေ့ကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်များကလည်း သူမရဲ့ အလှူထဲကို ပါဝင်လိုကြတဲ့အတွက် ရောင်းချတဲ့ ဝတ်စုံများအားလုံးကို ဝယ်ယူအားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအလှူလေးတွေ လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြသူတစ်ချို့လည်း ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်က မေရဲ့ Facebook Page တွင်တိမ်းရှောင်နေရချိန်မှာတောင် သူမရဲ့အဝတ်တွေကို ရောင်းချပြီးလှူဖို့ လုပ်နေပေမယ့် အပြစ်တင်ဝေဖန်သူများကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ရေးသား လာတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
” မနေ့က မေ့ရဲ့ ” The Journey ” ထဲက ဝတ်စုံလေးကို လေလံဈေး 770000 ကျပ် နဲ့ ကိုစိုးမင်းသန်း+မခင်နန္ဒာထွန်းတို့ချစ်သူနှစ်ဦးမှ ရသွားပါတယ်. . .💕 မခင်နန္ဒာထွန်း ရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် အခုလို လေလံအလှူလေးမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ မရလိုက်တဲ့သူတွေလည်း အခုလို လေလံမှာ အားတတ်သရောပါဝင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကူးတကတန်ဖိုးထားပြီးပါဝင်ပေးခဲ့လို့ မေအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်.🥰 MDY ကအကို တစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီလေလံမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး မရလိုက်ပေမယ့်လည်း ဟိုတစ်လောက မေ Piano တီးပြီးဆိုထားတဲ “စဉ်းစားပါ” သီချင်းလေးထဲမှာ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးကို ငါးသိန်းနဲ့ ရောင်းပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူက တွတ်ပီ Fan ဖြစ်နေတယ်. . .😄 အဲ့ဒါနဲ့ မေလည်း ” ဖြေပါ Baby ” ထဲက အင်္ကျီလေးကိုရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့သီချင်းလေးကလည်း တွတ်ပီရေးပေးခဲ့တဲ့သီချင်းလေး ပြီးတော့ မေ့အတွက်လည်းအမှတ်တရဖြစ်လို့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးထားပေးတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်. . .❤️တကယ်တော့ ဒီလေလံဟာ Game တစ်ခုသာဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ဝင်ကစားရမှမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်မကစားလည်းဘေးကနေထိုင်ကြည့်ပြီး နိုင်တဲ့သူကိုအားပေးလိုက်ရုံပေါ့။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ.. ပြီးတော့ ဒါကအလှူအတွက်လုပ်တာလို့လည်း အစ တည်းက ပြော ထားပါတယ်။
အဲ့ဒါကို ဘာလို့များ Comment တချို့မှာ သက်သက်အကုသိုလ်ဝင်ယူနေကြတာလဲဟင် (အပြုသဘောဆောင်ပြီး နောက်ပြောင်ကြတဲ့ Comment လေးတွေကို မေဘာမှမပြောလိုပါ) မေ တကယ်နားမလည်လို့ပါ အရမ်းလည်း Speechless ဖြစ်မိတယ်။ မေဆိုရင် ဒီလိုပုန်းရှောင်နေတဲ့ ကြားထဲကနေလူလေးနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ အဝတ်တွေ အရုပ်မှာ ဝတ်ပြီးရောင်းချပေးခဲ့ရတာ အရမ်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ပြီးတော့ Professional ရောင်းနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ အလှူအတွက်ဆိုပြီး တကယ် အပင်ပန်းခံပြီးသေချာလေးလုပ်ခဲ့တာ. . . . အဲ့တော့ လူတွေဟာ ” ကောင်းတာလုပ်လည်းဆဲ မကောင်းတာလုပ်လည်းဆဲ ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲ? ” ဆိုပြီးဖြစ်မိတယ် မေအခုလိုရေးတယ်ဆိုတာ ပြောမိတဲ့သူတွေများ ဖတ်မိခဲ့ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသပ်မိအောင်ပါ။ မေ့ရဲ့ဒီကိစ္စမှ မဟုတ်ဘူး အဲ့လိုလူတွေ တော်တော်များလာတာတွေ့ရလို့ပါ။ မနေ့က လေလံမှာရော အရှေ့ရက်တွေမှာ ရောင်းခဲ့တဲ့ အဝတ်တွေအကုန်လုံးကိုရော အားပေးခဲ့ကြ အလှူမှာအတူတူပါဝင်ပေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ်. . .🙏🏻 မေ ဘယ်နေရာမှာလှူဖြစ်မလဲ ပြန်ပြောပေးမယ်နော် ခဏတော့စောင့်ပေးပါ. . . (စာအရှည်ကြီးရေးမိသွားပြီ ဆောဒီးးနော်) 😬” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာတစ်ချို့ဟာ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေတာကို မကြည့်ရက်တဲ့အတွက် သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လှူဒါန်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်တွေ မမြင်ကြဘဲ ချစ်တဲ့စိတ်ဖြင့်သာ တွေးပေးကြဖို့ ပြောကြားရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက်ပေး လိုက် ရပါတယ်။
အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ အရေးပေါ်လူနာကို ကူညီရင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး